Ti8 & Ti9 ခနျြပီယံတှေ နညျးပွသှားမယျ့ OG Seed – Gaming Noodle
OG အသငျးဟာ ထုံးစံအတိုငျး Ti ခနျြပီယံဖွဈပွီးတာနဲ့ Inactive ပွနျဖွဈသှားပွနျပါပွီ။ ဒါပမေယျ့ ဒီနှဈမှာတော့ သူတို့ရဲ့ Activity တှပေါ လိုကျသသှေားတာမဟုတျဘဲ ပုံမှနျလှုပျရှားမှုလေးတှေ တှရေ့သလို မဂြောပှဲအတှဲ အနိုငျရမယျ့သူကို ခနျ့မှနျးတာမြိုးတှလေညျး လုပျလာပါတယျ။
ယနမှေ့ာတော့ OG ကစားတာကိုမှ ကွညျ့ခငျြပါတယျဆိုတဲ့ သူတှအေတှကျ သူတို့ရဲ့ ဒုတိယမွောကျ Dota2 အသငျးအဖွဈ OG Seed ကို မိတျဆကျလိုကျပါပွီ။ နာမညျအရတော့ သူတို့ဟာ ဒီအသငျးကို သဈစလေ့ေးကနအေပငျပေါကျလာတဲ့ထိ ပွုစုပြိုးထောငျပေးမယျ ဆိုတဲ့အဓိပ်ပါယျဖွဈပွီး OG မှ တရားဝငျထုတျပွနျထားတဲ့ စာထဲမှာလညျး “ဒီအသငျးကို ဖှဲ့စညျးရတဲ့ အိုငျဒီယာက ရိုးရှငျးပါတယျ။ မူလ Roster အပွငျ အောငျမွငျသငျ့သလောကျ မအောငျမွငျရသေးဘူး လို့ ကြှနျတျောတို့ ခိုငျမာစှာ ယုံကွညျထားတဲ့ ကစားသမားတှနေဲ့ အသငျးတဈခုကိုတညျဆောကျခငျြတာပါ” လို့ ဆိုထားပါတယျ။
“ကြှနျတျောတို့က ဒီအသငျးကို သူတို့အိပျမကျတှနေောကျလိုကျနိုငျဖို့ ကူညီပေးမှာဖွဈတယျ။ အခု DPC Season ရဲ့တတိယမွောကျမဂြောအထိ Ti နှဈထပျကှမျးခနျြပီယံတှကေ သူတို့ရဲ့အရညျအခငျြးတှကေို တိုကျရိုကျညှနျကွားပွသပေးမှာ ဖွဈပွီး OG Seed အတှကျ အားထုတျမှုနဲ့ခှနျအားတှပေေးသှားမှာပါ”
ဒါ့ကွောငျ့ OG ဟာ အခု DPC Season ရဲ့တတိယမွောကျ Major ဖွဈတဲ့ ESL One Los Angeles 2020 ပှဲအထိ OG Seed အပျေါပဲအားစိုကျသှားမှာဖွဈပွီး မူရငျး OG အသငျးအနနေဲ့ အဆိုပါပှဲကငျြးပမယျ့ မတျလလောကျအထိအေးအေးဆေးဆေးနနေဦေးမယျ့ သဘောပါပဲ။ မနခေငျြတဲ့လူတှကေတော့ OG Seed ကိုဝငျနညျးပွမယျ့သဘောပါ။
အခု ၂၈ ရကျနမှေ့ာ စတငျကငျြးပမယျ့ Dream League S13 EU Qua ပှဲမှာ OG Seed ကို အရငျဆုံးမွငျတှရေ့မှာ ဖွဈပွီး ဒီအသငျးမှာ ပရိသတျရငျးနှီးပွီးသား ကစားသမားတှဖွေဈတဲ့ –
5. Peksu တို့ပါဝငျလာပါတယျ။
ဝါရငျ့ကစားသမားတှဖွေဈတဲ့ Zfreek, Madara, Chessie တို့နဲ့အတူ Xibbe, Peksu တို့လို သှေးသဈကစားသမားတှကေို ပေါငျးစပျလာပွီး ဒီအသငျးသားတှဟော သူ့ပရိသတျနဲ့သူရှိသျောလညျး OG က ပွောတဲ့အတိုငျး ကွီးမားတဲ့အောငျမွငျမှုတှကေိုတော့ မရရှိဖူးသေးပါဘူး။ OG Seed အနနေဲ့ ဘယျလောကျထိ ခရီးရောကျမယျ ဆိုတာ စောငျ့ကွညျ့ရဦးမှာပါ။ OG ကတော့ လောလောဆယျ အနိုငျအရှုံးကို စိတျမဝငျစားဘူးလို့ ဆိုထားတဲ့အပွငျ သူတို့ Mindset အရ တကယျလညျး စိတျဓါတျခှနျအားပါပေးပွီး ကစားစတေဲ့သူတှဖွေဈလို့ Dota2Pro Scene အတှကျတော့စိတျဝငျစားစရာပါ။
လောလောဆယျ Dota3လို့ဆိုရလောကျအောငျ ပွောငျးလဲသှားတဲ့ Outlanders Update အပွီးမှာOG မှ Ti ခနျြပီယံတှကေ OG Seed ကို ဘယျလိုနညျးဗြူဟာတှနေဲ့ ကစားစမေလဲ၊ ဒါမှမဟုတျ အစမျးသပျခံတှလေား ဆိုတာကိုလညျး မွငျရမယျလို့ မြှျောလငျ့ပါတယျ။
Ti8 & Ti9 ချန်ပီယံတွေ နည်းပြသွားမယ့် OG Seed
OG အသင်းဟာ ထုံးစံအတိုင်း Ti ချန်ပီယံဖြစ်ပြီးတာနဲ့ Inactive ပြန်ဖြစ်သွားပြန်ပါပြီ။ ဒါပေမယ့် ဒီနှစ်မှာတော့ သူတို့ရဲ့ Activity တွေပါ လိုက်သေသွားတာမဟုတ်ဘဲ ပုံမှန်လှုပ်ရှားမှုလေးတွေ တွေ့ရသလို မေဂျာပွဲအတွဲ အနိုင်ရမယ့်သူကို ခန့်မှန်းတာမျိုးတွေလည်း လုပ်လာပါတယ်။
ယနေ့မှာတော့ OG ကစားတာကိုမှ ကြည့်ချင်ပါတယ်ဆိုတဲ့ သူတွေအတွက် သူတို့ရဲ့ ဒုတိယမြောက်Dota2 အသင်းအဖြစ် OG Seed ကို မိတ်ဆက်လိုက်ပါပြီ။ နာမည်အရတော့ သူတို့ဟာ ဒီအသင်းကို သစ်စေ့လေးကနေ အပင်ပေါက်လာတဲ့ထိ ပြုစုပျိုးထောင်ပေးမယ် ဆိုတဲ့အဓိပ္ပါယ်ဖြစ်ပြီး OG မှ တရားဝင်ထုတ်ပြန်ထားတဲ့ စာထဲမှာလည်း “ဒီအသင်းကို ဖွဲ့စည်းရတဲ့ အိုင်ဒီယာက ရိုးရှင်းပါတယ်။ မူလ Roster အပြင် အောင်မြင်သင့်သလောက် မအောင်မြင်ရသေးဘူး လို့ ကျွန်တော်တို့ ခိုင်မာစွာ ယုံကြည်ထားတဲ့ ကစားသမားတွေနဲ့ အသင်းတစ်ခုကို တည်ဆောက်ချင်တာပါ” လို့ ဆိုထားပါတယ်။
“ကျွန်တော်တို့က ဒီအသင်းကို သူတို့အိပ်မက်တွေနောက်လိုက်နိုင်ဖို့ ကူညီပေးမှာဖြစ်တယ်။ အခု DPC Season ရဲ့ တတိယမြောက်မေဂျာအထိ Ti နှစ်ထပ်ကွမ်းချန်ပီယံတွေက သူတို့ရဲ့အရည်အချင်းတွေကို တိုက်ရိုက်ညွှန်ကြားပြသပေးမှာ ဖြစ်ပြီး OG Seed အတွက် အားထုတ်မှုနဲ့ခွန်အားတွေပေးသွားမှာပါ”
ဒါ့ကြောင့် OG ဟာ အခု DPC Season ရဲ့တတိယမြောက် Major ဖြစ်တဲ့ ESL One Los Angeles 2020 ပွဲအထိOG Seed အပေါ်ပဲအားစိုက်သွားမှာဖြစ်ပြီး မူရင်း OG အသင်းအနေနဲ့ အဆိုပါပွဲကျင်းပမယ့် မတ်လလောက်အထိအေးအေးဆေးဆေးနေနေဦးမယ့် သဘောပါပဲ။ မနေချင်တဲ့လူတွေကတော့ OG Seed ကိုဝင်နည်းပြမယ့်သဘောပါ။
အခု ၂၈ ရက်နေ့မှာ စတင်ကျင်းပမယ့် Dream League S13 EU Qua ပွဲမှာ OG Seed ကို အရင်ဆုံးမြင်တွေ့ရမှာ ဖြစ်ပြီး ဒီအသင်းမှာ ပရိသတ်ရင်းနှီးပြီးသား ကစားသမားတွေဖြစ်တဲ့ –
5. Peksu တို့ပါဝင်လာပါတယ်။
ဝါရင့်ကစားသမားတွေဖြစ်တဲ့ Zfreek, Madara, Chessie တို့နဲ့အတူ Xibbe, Peksu တို့လို သွေးသစ်ကစားသမားတွေကို ပေါင်းစပ်လာပြီး ဒီအသင်းသားတွေဟာ သူ့ပရိသတ်နဲ့သူရှိသော်လည်း OG က ပြောတဲ့အတိုင်း ကြီးမားတဲ့အောင်မြင်မှုတွေကိုတော့ မရရှိဖူးသေးပါဘူး။ OG Seed အနေနဲ့ ဘယ်လောက်ထိ ခရီးရောက်မယ် ဆိုတာ စောင့်ကြည့်ရဦးမှာပါ။ OG ကတော့ လောလောဆယ် အနိုင်အရှုံးကို စိတ်မဝင်စားဘူးလို့ ဆိုထားတဲ့အပြင် သူတို့ Mindset အရ တကယ်လည်း စိတ်ဓါတ်ခွန်အားပါပေးပြီး ကစားစေတဲ့သူတွေဖြစ်လို့ Dota2Pro Scene အတွက်တော့ စိတ်ဝင်စားစရာပါ။ လောလောဆယ် Dota3လို့ဆိုရလောက်အောင်ပြောင်းလဲသွားတဲ့ Outlanders Update အပြီးမှာ OG မှ Ti ချန်ပီယံတွေက OG Seed ကို ဘယ်လိုနည်းဗျူဟာတွေနဲ့ ကစားစေမလဲ၊ ဒါမှမဟုတ် အစမ်းသပ်ခံတွေလား ဆိုတာကိုလည်း မြင်ရမယ်လို့ မျှော်လင့်ပါတယ်။